अजीवको छोरो छ मसँग । उमेरले २५ वसन्त पार गरिसक्यो । मध्यराति रल्लिएर घर आउँछ, भोलिपल्ट १२ बजे उठेर हिँड्छ । कहिले साथीसँग त कहिले एक्लै । महिना दिनमा एकचोटि नुहाउँछ । ऊ आएपछि कोठामा बसिसक्नु हुँदैन । डुङडुङती गन्हाउँछ । मास्क लगाएर सुत्दा पनि समस्याको हल हुँदैन । उसकै कारण एउटा कोठालाई बीचमा तन्नाले बारेर दुइटा बनाउनुपरेको छ । तैपनि सास्ती हटेको छैन ।… विस्तृत समाचार
२६ वर्षसम्म धर्ती बनेर सहें उनका अत्याचार र व्यभिचार । अब सक्दिनँ सहन योभन्दा धेरै यातना । वारपारको अन्तिम लडाइँमा छु । श्रीमान्को चरम यातना र पिटाइपछाडि माइतीको आडमा बसिरहेकी छु । ‘यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ अर्थात् जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता खुशी हुन्छन् वा रमाउँछन् भन्नु पनि बेकारझैं लाग्दो रहेछ । छलकपटी र जालसाजहरूका अगाडि कसैको केही जोर चल्दो रहेनछ ।… विस्तृत समाचार
नारीको अर्काे रूप धर्ती यसै भनिएको होइन रहेछ । चाणक्य भन्छन्, पुरुषभन्दा नारीले सोह्र गुणा बढी सहन सक्छन् । सहुँ सहुँजस्तै परे पनि । उनी धर्ती बनेर सहिरहेकी छन्, पीडाको अजंगको पहाड । श्रीमान्बाट भोगेका अत्यासलाग्दा पीडाबीचसमेत अनवरत श्रीमान्माथि माया खन्याइरहेकी छिन् । सहर बजारमा आजकल ब्रोइलर पिरती गाँस्नेहरू मायाको बदलामा माया खोज्छन् । शरीरका लागि मात्र प्रेम गर्ने आजको तन्नेरी पुस्ताले यिनीबाट सिक्नुपर्ने र… विस्तृत समाचार
इज्जत हुनेलाई न हो बेइज्जतको डर ! जसको इज्जत छैन उसलाई बेइज्जतीको फिक्री पनि नहुँदो रहेछ । शिक्षित र सम्भ्रान्त परिवारभित्रै बुहारीमाथि दानवीय व्यवहार हुन्छ भन्दा पत्यार नलाग्ला तर नेपाल सरकारको सचिवबाट निवृत्त पाण्डेको घरमा बुहारीमाथि हरेक दिन मानसिक यातना र त्राडना हुन्छ । तर, १० वर्षदेखि एक चेली सासू, ससुरा, श्रीमान् र देवरबाट मानसिक प्रताडना बेहोरिरहँदा, पीडाको अजंगका पहाडबीच समेत सही रहेकी छन् । कारण… विस्तृत समाचार
जीवनमा खुशीको प्याला पिउने त धेरै भेटिन्छन् तर दुःखको आँशु विल्कुलै एक्लै रित्याउनुपर्ने रहेछ । एकबारको जुनीमा जब आफन्ती नै बैरी बन्छन्, आफन्त भनिएकाहरूले नै छुरा धस्छन्, आफ्नै रगत भनिएकाहरूले घात/प्रतिघात गर्छन् । तब हाँस्नु कसरी ? बाँच्नु कसरी ? भन्छन् नि, ‘आफन्त ती होइनन्, जसले रुँदा साथ दिन्छन्, आफन्त त ती हुन् जसले रुन दिँदैनन् ।’ हो, यस्तै आफ्नै रगतबाट प्रताडित व्यक्ति हुँ म… विस्तृत समाचार
एक धर्काे सिन्दूरका कारण धेरै चेलीको जिन्दगी आवाद भएको छ । र, यही सिन्दूरका कारण धेरै चेली बर्बाद पनि भएका छन् । हतारमा बिहे गरेर फुर्सदमा पछुताउने माइतीहरू धेरै छन् । आफ्नो छोरी–चेली अन्माउनुअगाडि कुलघरानबारे बुझेर मात्र विवाह गर्नुपर्ने हो । तर, जब अभिभावकका लागि छोरी चेली बोझ ठहरिन्छ र हतार–हतार छोरीको हात पराइलाई सुम्पिइन्छ अनि सुरु हुन्छ छोरीको भागमा आँसु । उनी पनि त्यसको… विस्तृत समाचार
आँखा चिम्ले पीडा, आँखा बन्द गरे पनि पीडा । आखिर दुनियाँ स्वार्थी न हो । यहाँ सुखमा साथ दिने धेरै हजारौं भेटिन्छन् । दुःखको आँसु एक्लै पिउनु पर्छ । यस्तै रहेछ संसारको रीत । मनभरी जोश थियो, जीवनमा धेरै गर्छु र गर्नु छ भन्नुहुन्थ्यो । दैव लाग्यो । भन्छन्, ऋण लागोस् दिन नलागोस् । तर, हामीलाई एकैपटक ऋण र दिन लाग्यो । पिँढीमा बसेर मेरै… विस्तृत समाचार
सुनमा जन्मिएर हीरामा हुर्किएको मान्छे । दुःख, पीडा र अभाव के हो ? पाठ्यपुस्तकमा पढेको थिएँ, बुबाआमाको काखमा हुँदा यसको आभाष थिएन । छायासमेत पर्न पाएको थिएन । परभूमिमा भोग्दै छु जीवन । नजिक हँुदा कहिल्यै महसुस नगरेको बुबाआमा र संगीहरूको माया अनुभव गर्दै छु । र, आज परदेशमा नसम्झेको क्षण छैन बुबाआमालाई । जसै कल्पन्छु जन्मदाताको माया टिलफिल टिलपिल हुन्छ आँखा । बाल्यकाल काठमाडौंमै… विस्तृत समाचार
रामायणमा रामले सीता गुमाए तर यहाँ त म आफँै गुम्ने निश्चित छ । उनीहरू दुवै जनासँग हिमचिम र चिनजान भएको दुई वर्ष बित्दै छ । चिनापर्चीभन्दा पनि त्यसपछिको सम्बन्ध प्रगाढ हुने रहेछ, दुई दिनको जिन्दगीमा । घरी–घरी लाग्छ, बरु चिनजानै नभएको भए कति जाति हुन्थ्यो होला । आफ्नो दुनियाँमा रमाउन त सक्थँे, कमसेकम । यसरी तड्पिएर जिउनु पर्दैनथ्यो । न मर्छु भनेर मर्न सकिरहेछु न… विस्तृत समाचार
मान्छेका रहरहरु कहिल्यै पूरा हुँदैनन् । माया गर्ने, माया पाउने– यही न हो जिन्दगी । तर, हामी पुलिसहरु आफ्नो निजी रहर तालिमको परेडमै बिसाएर बर्दीलाई आफ्नो मान र शान मान्ने जात प¥यौँ । यतिबेला लाग्दैछ, कर्तव्यपरायण प्रहरीका लागि मात्र रहेछ, निजी जीवन, मोज र मस्ती नहुने । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत फम्र्ड पुलिस युृनिट (एफपियु– १) को २२ औँ टोलीमा सामेल भई हाइटीमा खटिएका छौँ ।… विस्तृत समाचार